ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: May 2008
ကျောင်းပိတ်ရင်.. ရွာပြန်.. ကျုရှင်ဆရာပြန်လုပ်ပေါ့..။ ဒုတိယနှစ်ပိတ်လို့ ရွာပြန်လာရတယ်..။ ဂစ်တာ တစ်လက်လဲ.. ရွာအပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ပါလာခဲ့တယ်..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲကျင်းပတဲ့ အချိန်နဲ့ ဆုံတယ်..။
ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့.. ရွာသားသုံးလေးယောက်ပေါင်းပြီး.. ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲမှာ.. တီးဝိုင်းထည့်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်..။ ရွာမှာ.. အထက်တန်းကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်.။ ဦးစိန်မြင့်လို့ ခေါ်တယ်..။ သူက.. ဂစ်တာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တီးတတ်တယ်..။ သူက တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်ပေါ့..။ ကျွန်တော်က.. ရစ်သမ်ခေါက်တယ်..။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ၀င်းနိုင်ဦးက.. ဘေ့စ်လိုက်တယ်..။
ဟော်လို ဂစ်တာတွေမှာ..ပစ်ကပ်မိုက်ကလေးတွေ တပ်ပြီး တီးကြတာပဲ..။ သီချင်းတွေ ကြိုတိုက်ကြတယ်..။ ကျော်ဟိန်းရဲ့ တို့မယုံဘူး.. သီချင်းကနေ.. ခင်မောင်ထူးရဲ့.. အမှန်တကယ်မြတ်နိုးနေသူမို့.. သူပြန်လည် မတုံ့ပြန်ပေမယ့်.. ဆိုတာအထိ သီချင်းစုံပဲ..။
ညမှာ.. ရပ်ကွက်ဘုရားမီးစက်မောင်းပြီး ပွဲခင်းကို.. မီးပေးထားတယ်..။ ဘုရားကုန်းမှာ.. ဇာတ်စင် ဆောက်ထားတယ်..။ ပေပါ အခွံတွေအောက်ကခံပြီး အပေါ်က.. လျှာထိုးပျဉ်သားတွေ.. တင်ထားတာပဲ..။ ဇာတ်ခုံတာဝန်ခံက.. ကိုအေးသိန်းလို့ ခေါ်တယ်..။ သူလဲ.. ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပဲ..။
ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ.. သူ့အိမ်က..ရှိစုမဲ့စု သင်ဖြူးဖျာ သုံးလေးငါးချပ် ခင်းထားရှာတယ်..။
ညရှစ်နာရီလောက်မှာ.. တီးဝိုင်းစတယ်..။ အနောင့်ဇာက ကြေငြာတယ်..။
"အခု ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ အလှည့်ကျသူကတော့.. ကိုလှမြိုင်ဖြစ်ပါတယ်.. သီဆိုမယ့်သီချင်းကတော့.. ကျော်ဟိန်းရဲ့ တို့မယုံဘူး.. လို့ အမည်ရပါတယ်.. "
အောက်က ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီ အဖြူနဲ့ အပေါ်က.. စတစ်ကော်လာ အင်္ကျီအဖြူ .. ၀မ်းဆက်နဲ့.. လှမြိုင် ဇာတ်စင်ပေါ် တက်လာတယ်..။ ရွှီ.. ရွှီ.. ဖြောင်း..ဖြောင်း.. ရွှီ..ဖြောင်း.. နဲ့ ပရိတ်သတ်က အပြတ်အားပေးတယ်..။ ဇာတ်ခုံတာဝန်ခံ ကိုအေးသိန်းကလဲ.. လက်ခုပ်တီးပြီး.. လှမြိုင်ကို.. ကြိုဆိုတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. လှမြိုင် ခြေကြွလိုက်တိုင်း.. အောက်က သင်ဖြူးက ကပ်ကပ်ပါလာတယ်..။ အဲဒါကို တွေ့တဲ့. ကိုအေးသိန်းက သူ့သင်ဖြူးတွေကို.. ထသိမ်းတယ်..။ အောက်က ပရိတ်သတ်ကလဲ.. ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်..။ ကျွန်တော်တို့မှာတော့.. တီးလုံး စရတော့မှာလိုလို.. ရပ်ထားရမှာလိုလို ဖြစ်နေတယ်..။
ဖြစ်ပုံက ဒီလို..။ လှမြိုင်.. က.. အဖြူဝမ်းဆက်နဲ့ မိုက်နေပေမယ့်.. စီးလာတဲ့ ..ဖိနပ်က.. ရူးဖိနပ်မဟုတ်ဘူး..။ သံခွါတွေနဲ့.. ဘောလုံးကန်ဖိနပ်ကြီး.. စီးလာတာ..။ ဘောကန်ဖိနပ်က သံခွါတွေကြောင့် ကိုအေးသိန်း သင်ဖြူးတွေ ငြိပြီး စုတ်ကုန်တယ်..။ နောက်မှ.. ပရိတ်သတ်က..အထာပေါက်ပြီး တသောသောရီကြတယ်..။
လှမြိုင်က.. စိတ်ဆိုးပြီး .. ဇာတ်ခုံအောက်ဆင်းသွားတယ်..။
အနောင် ဇာက ချက်ခြင်းပဲ..
"တို့မယုံဘူး သီချင်းကို သီဆိုမယ့်.. အဆိုတော် ကိုလှမြိုင်.. ခရီးလွန်နေပါသဖြင့်.. ငယ်သူမို့ သီချင်း သီဆိုမယ့်.. မိုးကျော်.. အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်.. " လို့.. ထ ကြေငြာတယ်..။
ပရိတ်သတ်က.. တ၀ါးဝါးနဲ့ ဖြစ်နေပြီ..။
မိုးကျော် တက်လာတော့မယ် ထင်လို့ မျှော်နေတုံး လှမြိုင်က.. ဇာတ်ခုံပေါ် ပြန်တက်လာတယ်..။ ပရိတ်သတ်ကလဲ.. ဘာတုံးပေါ့..။ လှမြိုင်က.. မိုက်ခွက်ကို.. လှမ်းယူလိုက်တယ်..။ ပြီးမှ..
" ငါ့ -ီး ခရီးလွန်ဗျာ.. ငါ့ -ီး ခရီးလွန်.. " လို့ ပြောပြီး ပြန်ဆင်းသွားတယ်..။
ပွဲခင်းတစ်ခုလုံး.. အူတက်မတတ်.. ရယ်လိုက်ကြတာ..။
မိုးကျော်စင်ပေါ်တက်လာတာနဲ့.. ကျွန်တော်တို့ တီးဝိုင်းအဖွဲ့.. အင်ထရိုစတယ်..။ စိုးလွင်လွင်ရဲ့ ငယ်သူမို့ သီချင်း.. အင်ထရိုလေးက.. အရမ်းညက်တယ်..။ ညာလက်နဲ့မိုက်ကို ကိုင်.. ဘယ်ခြေ ရှေ့ထုတ်ပြီး မိုးကျော် စတိုင်တင်းနေတယ်..။
"စိတ်အလိုကို လိုက်ကာ.. ငယ်သူမို့ မသိတတ်ခဲ့ပါ.." intro အဆုံးမှာ.. ငြိမ့်ညောင်းတဲ့.. အသံအေးအေးလေးနဲ့.. မိုးကျော် စ ဆိုတယ်..။
ရွှီ.. ဖြောင်းဖြောင်း.. ရွှီ ရွှီ..
" ဟိုး တစ်ချိန်ပြန်လွမ်းစရာ .. ပျော်ရွှင်သော ချစ်ရက်များစွာ.. တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဟာ... "
..... ...... ...... ........ ........ ......... .................... ........ ........... ....... ................
သီချင်းသံရပ်သွားတယ်.. ။ စင်ပေါ်မှာ မိုက်ကိုင်ပြီး မိုးကျော်.. ခေါင်းကုတ်နေတယ်..။ သီချင်းမေ့သွားတာပဲ..။ ကျွန်တော်တို့ ဂစ်တာသမားများကတော့.. ရပ်မဖြစ်တော့.. ဆက်တီးနေရတာပေါ့..။
"ဟေ့ကောင်.. မရတော့ဘူးမဟုတ်လား.. ဆင်း.. ဟားဟားဟား.. " နဲ့ ပရိတ်သတ်ထဲက.. ခပ်နောက်နောက်ကောင်တွေက.. လှမ်းအော်ကြတယ်..။ ပရိတ်သတ်ကလဲ.. တ၀ါးဝါးနဲ့ ရယ်နေကြပြီ..။
မိုက်ကလေးကို.. တိုင်ပြန်ချိန်ပြီး.. မိုးကျော်.. ဆင်းသွားတယ်..။ Announcer က.. နောက်တစ်ယောက် ကြေငြာမယ်လုပ်နေတုံး မိုးကျော်ပြန်တက်လာတယ်..။
ပရိတ်သတ်အားလုံး ငြိမ်သွားတယ်..။ မိုးကျော်လက်ထဲမှာ.. ငှက်ကြီးတောင် ဓါးကြီးနဲ့ကိုး..။ ဓါးကြီးကို.. လက်တစ်ဖက်ကကိုင်ရင်း.. မိုက်ခွက်ကို.. ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ လှမ်းယူလိုက်တယ်..။
ပရိတ်သတ်ထဲကို.. စူးစူးဝါးဝါးကြည့်ရင်း.. "အခုနက.. ငါ့ကို စင်ပေါ်က ဆင်းခိုင်းတာ ဘယ်မအေပေးလဲ... မိုက်ရင် စင်ပေါ်တက်ခဲ့.. မိုးကျော်တဲ့ကွ.. ဘက်မရွေးဘူး.." ဆိုပြီး.. စိန်ခေါ်တော့တာပဲ..။
"အခုနက စတာပါဗျို့.. ကိုမိုးကျော်သီချင်းဆိုတာ..သိပ်ကောင်းပါတယ်ဗျို့.. " နဲ့ အောက်ကပရိတ်သတ်က.. ၀ိုင်းအော်ကြတယ်..။
"အေး.. အဲဒါဆိုလဲ.. ပြီးရော.. " ဆိုပြီး မိုက်ပြန်ချိတ်ပြီး စင်ပေါ်က ဆင်းသွားခဲ့တယ်..။
Posted by navana at 5:07 PM
Labels: 10 ကျောင်းပိတ်ရက် ရွာအပြန်
ရွာမှာ.. ဆယ့်သုံးရပ်ကွက်ရှိတယ်..။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲတွေမှာ.. တချို့ရပ်ကွက်ဆို.. ညလုံးပေါက်.. ဇာတ်ကတယ်..။
တကယ့်.. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အငြိမ့်တွေ ကတဲ့အတိုင်း ကကြတာပဲ..။
ညဦးပိုင်းမှာ.. ရပ်ကွက်သူကလေးတွေရဲ့ ယိမ်းထွက်တယ်..။ ပြီးတော့ စတိတ်ရှိုး..။ ပြဇာတ်က နောက်ဆုံးပဲ..။
မင်းသမီးကတော့.. မြို့တက်ငှားရတယ်..။ ပွဲမတိုင်မီ နှစ်ရက်အလိုမှာ မင်းသမီးက ရွာရောက်တယ်..။ အဲဒီရက်တွေမှာ.. ဇာတ်တိုက်ကြရတယ်..။ ပြဇာတ်မင်းသား လူကြမ်းအားလုံးက.. ရွာသားတွေချည်းပဲ..။ ရွာသား ပြဇာတ်ဒါရိုက်တာက.. ဇာတ်ညွှန်းချပြပြီး.. ရပ်ကွက်ထဲက.. အိမ်တအိမ်မှာ.. ဇာတ်တိုက်ကြတာပဲ..။
မင်းသမီးကို..ဘယ်အိမ်မှာ ထားမလဲ ဆိုတဲ့.. ကိစ္စကလဲ.. ရွာသားတွေကြား.. အတော်ကြီးတဲ့ ပြဿနာပေါ့..။ ဟိုလူကလဲ သူ့အိမ်ခေါ်ထားချင်.. ဒီလူကလဲ..သူ့အိမ်မှာ မင်းသမီးကို.. နေစေချင်နဲ့.. အတော့်ကို.. အငြင်းပွားလေ့ရှိတယ်..။
များသောအားဖြင့်တော့.. ရပ်ကွက်လူကြီးအိမ်မှာ.. မင်းသမီး နေရတယ်။
မင်းသမီး သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ်..။ ရပ်ကွက်ထဲက ကာလသားများရဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်က.. မင်းသမီးကို.. တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရဖို့ပဲ..။ ပွဲညမှာ.. မင်းသမီးငိုတယ်..။ ပြဇာတ်ထဲက ငိုခန်းမှာ မဟုတ်ဘူး..။ ပိတ်ကားနောက်မှာ..ငိုရရှာတာ..။
ပြဇာတ်ထဲမှာ.. မပါတဲ့ ကာလသားများကလည်း.. မင်းသမီးနဲ့ တွဲချင်ကြတယ်..။ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ရန်ပုံငွေထဲမှာ အားလုံးက ထည့်ဝင်ကြရာတာဆိုတော့.. အခွင့်အရေးကို တန်းတူယူချင်ကြတယ်..။ နောက်ဆုံးတော့.. တေးသရုပ်ဖော် ဆိုပြီး .. မင်းသမီးနဲ့ မတွဲရ တွဲရအောင် ကြံကြတယ်။
ဘလိုင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး..။ ဟာသမြောက်အောင်လဲ.. လုပ်ကြတယ်..။ သူတို့ လိုဘပြည့်အောင်လဲ.. ဆင်ကြံကြံကြတယ်။
ပွဲညမှာ.. မောင်ဂဠုန်ရဲ့ "ချစ်လို့ " ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကိုကိုကာလသားများ စင်ပေါ်တက်လာကြတယ်။ မင်းသမီးက.. သူတို့အလယ်မှာပေါ့..။
"ဆံပင်တွေကို.. လေနဲ့မှုတ်မယ် .. ချစ်လို့ ချစ်လို့.. " ဆိုပြီး ကာလသား တစ်ယောက်က.. မင်းသမီးဆံပင်လေးကို.. လေနဲ့မှုတ်တယ်..။
နောက်တစ်ယောက်က... ကပ်ကြေး အကြီးကြီးနဲ့.. " လက်သည်းလေး ကိုယ်ညှပ်ပေးမယ်.. ချစ်လို့ ချစ်လို့.. " ဆိုပြီး မင်းသမီးလက်ကလေး ကိုင်ပြီး.. လက်သည်းညှပ်သယောင်.. လုပ်ပြတယ်..။
"ကြင်နာစွာနဖူးလေး နမ်းမယ်.. ချစ်လို့ ချစ်လို့ " ဆိုတဲ့ စာသားအရောက်မှာတော့.. မင်းသမီးခမျာ.. အတော်ရှောင်လိုက်ရတယ်..။ အောက်က ပုရိတ်သတ်ကတော့.. ပွဲကျနေတာပေါ့..။ သီချင်းဆုံးခန်းနီးမှာ.. မီးပြတ်သွားတယ်..။ ပုရိတ်သတ်ကတော့.. ရိုးရိုးထင်တာပေါ့..။ ဒါပေမယ့် မောင်မင်းကြီးသားများက.. ဆင်ကြံကြံပြီး မီးဖြတ်ပစ်လိုက်တာပဲ..။
ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ.. မီးမှောင်တုံး မင်းသမီးကို..၀ိုင်းဖက်ကြတယ်..။
မီးပြန်လာတော့.. မင်းသမီးက ဇာတ်ခုံနောက်မှာ ငိုနေပြီ..။ မကတော့ဘူး..ပြန်မယ် ဆိုပြီး လုပ်လို့.. ရပ်ကွက်လူကြီးများက.. တောင်းပန်ကြတယ်။
နောက်တော့.. မင်းသမီးလဲ.. သည်းခံရ တစ်ညပေါ့ ဆိုတဲ့.. အတွေးမျိုးနဲ့ ဆက်ကဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ (မင်းသမီး စိတ်ထဲ ဘယ်လိုရှိသလဲတော့ သေချာမသိပါဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလို ထင်တာပဲ..။ )
Posted by navana at 5:29 PM
ပြဇာတ်.. စ ပြီ..။ ကားလိပ်က တရွေ့ရွေ့ ပွင့်သွားတယ်။ ဆလိုက်မီးတွေက.. ဇာတ်ခုံပေါ်ကို.. ၀ိုင်းထိုးကြတယ်။ မင်းသားက ခပ်စောင်းစောင်းကလေး.. ထိုင်နေတယ်..။ ဆွေးဆွေးငေးငေးလေးပေါ့..။
"နန်းရယ်.. ကိုယ့်တို့ ဒီဘ၀မှာ.. ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား.. လွမ်းတယ် နန်းရယ်.. ကိုယ့်အသဲနှလုံး အလွမ်းမြေကွက်ပေါ်မှာ.. နန်းရဲ့ အချစ်ပန်းလေးတွေ လာရောက်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးပါတော့ကွယ်.."
မင်းသားကတော့.. မလှုပ်မယှက်ထိုင်နေတာပဲ..။ ဒါရိုက်တာ က.. နောက်ခံ စကားပြောပေးနေတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ..
"ကိုကို.." ဆိုပြီး မင်းသမီးက.. ဇာတ်ခုံထောင့်ကနေ ပြေးထွက်လာတယ်..။ ဒါပေမယ့် ပြေးရင်းတန်းလန်း.. လက်ကားယား ခြေကားယားနဲ့ ရပ်သွားတယ်..။ မင်းသားဆီမရောက်ဘဲ.. ရောက်တဲ့နေရာမှာ.. ရုပ်သေ ရပ်နေရတယ်..။
"ယနေ့ည ကျွန်တော်များ.. ပန်းတံတား အချစ်ဇာတ်ကြမ်းကားကြီးမှာ.. ဖခင်နဲ့ ချစ်သူအကြား ဗျာများရတဲ့ နန်းစောအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့်သူကတော့.. မင်းသမီးချောကလေး.. ၀ါဝါမိုးဖြစ်ပါတယ်.. " လို့.. နောက်က.. ကြေငြာတယ်..။
မင်းသားကလဲ.. ခေါင်းတချက် စောင်းငဲ့ပြီး.. " နန်းးးးး " လို့ ၀မ်းသာအားရ အော်ပြီး ထိုင်ရာက ထဖို့လုပ်တယ်..။ ဒါပေမယ့်.. သူလဲ.. ဇာက်ကြီးစောင်းပြီး..ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ရုပ်သေကြီး လုပ်နေရတယ်..။
နောက်က.. စကားပြောတဲ့လူက.. "တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် နှလုံးသားကို စတေး.. အသက်ကိုပေးဖို့ ၀န်မလေးတဲ့.. မျိုးချစ်စစ်ဗိုလ်လေး ခွန်နောင် အဖြစ်.. ကပြအသုံးတော်ခံမှာတော့.. စိုးအောင် ဖြစ်ပါတယ်.."
ပြီးမှ... "နန်းးးး" "ကိုကို" ဆိုပြီး.. ပြေးဖက်ကြတယ်..။ မင်းသမီးအရိုးကျိုးမှာတောင် စိုးရတယ်..။ ဖက် ချက်ကတော့..။
"ဟေး... ရွှီရွီ.. ဖြောင်းဖြောင်း.. ရွှီရွှီ.. မိုက်တယ်ကွာ.."
လက်ခေါက်တွေမှုတ်.. လက်ခုပ်တွေတီး.. ပုရိတ်သတ်က..အပြတ်အားပေးနေတုံး.. ကားလိပ်က.. တဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ်..။ ကားလိပ်အကွယ်မှာ.. မင်းသားက.. ဖက်ထားတာ မလွတ်လို့ ဆိုပြီး မင်းသမီးခမျာ.. ဇာတ်ခုံနောက်မှာ.. ငိုရရှာပြန်တယ်..။
ဒါပေမယ့်.. မင်းသမီးကလဲ.. သူ့ခွင်ဝင်တော့.. လက်စားပြန်ချေတယ်..။ မင်းသားကို.. အထင်လွဲတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ.. မင်းသမီးက.. လက်သံပြောင်ပြောင်နဲ့ မင်းသားပါးကို.. တီးထည့် လိုက်ရော..။ ပရိတ်သတ်အမြင်မှာတော့ .. သဘာဝ သိပ်ကျနေတာပေါ့..။ ဒါပေမယ့်.. မင်းသားလုပ်တဲ့.. စိုးအောင်ပါးကတော့.. ကြိမ်းသွားတယ်..။ အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းလဲ ပြီးရော..ကားလိပ်အကွယ်မှာ..
" သိမယ်.. သိမယ်.. တွေ့ကြသေးတာပေါ့.. " လို့ စိုးအောင် ကြုံးဝါးတယ်..။
နောက်တစ်ခန်းမှာ.. မင်းသားမင်းသမီး ပြန်ပြေလည်သွားတယ်..။ သူငယ်ချင်းအိမ်ကို.. နှစ်ယောက်သား သွားလည်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပေါ့..။ စိုးအောင်က.. မင်းသမီးခါးကို.. ဖက်ပြီး .. နှစ်ယောက်သားပြုံးရယ်ပြီး ထွက်လာ ကြတယ်..။
သူငယ်ချင်းလုပ်တဲ့အိမ်ရှင်ငနဲ နဲ့.. စကားထိုင်ပြောကြတယ်..။ တောက်လျှောက်ဖက်ထားတယ်..။ မင်းသမီးခမျာ.. ဇာတ်ကွက်နဲ့ လိုက်အောင် ပြုံးနေရပေမယ့်.. အတော်နေရထိုင်ရ ခက်နေဟန်ရှိတယ်..။
ပြန်ခါနီး စိုးအောင်နဲ့ မင်းသမီး ထိုင်ရာက ထ ပြီး အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်တယ်..။
ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်.. လို့ စိုးအောင်က ပြောပြီး မင်းသမီးကို ဖက်လျက်.. ဇာတ်ခုံထောင့်ကို.. ၀င်သွားတယ်..။ ပ၇ိတ်သတ်က.. တစ်ခန်းပြီးသွားပြီထင်နေတုံး.. စိုးအောင်က.. မင်းသမီးကို ဖက်လျက်ပြန်ထွက်လာပြန်တယ်..။
အံ့သြတကြီးဖြစ်နေတဲ့.. အိမ်ရှင်သူငယ်ချင်းနား ရောက်မှ.. " ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်.. " လို့.. ပြောပြီး ဇာတ်ခုံနောက် နှစ်ယောက်သား ၀င်သွားကြတယ်..။
တော်နေကြာတော့.. နှစ်ယောက်သား ဖက်လျက် ပြန်ထွက်လာပြန်တယ်..။ ထုံးစံအတိုင်း.. "ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်.." လုပ်ပြန်တယ်..။
အောက်က ပရိတ်သတ်ကတော့.. ဟာသလုပ်တယ်ထင်ပြီး.. ရယ်ကြတာပေါ့..။ ဒါပေမယ့်.. စိုးအောင်က.. တမင်သက်သက်လုပ်တာ..။ မူရင်းဇာတ်လမ်းအရဆို.. တစ်ခါနှုတ်ဆက်ရင် ရပြီ..။
အဲဒီအကြောင်းတွေကို.. အသေးစိတ်ကျွန်တော်သိနေရတဲ့.. အကြောင်းရှိပါတယ်...။ ကျွန်တော်လေးတန်းနှစ်မှာ.. မိဘများနေတဲ့.. အစိုးရပိုင်မြေကနေ.. ကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးရပါတယ်..။ အဲဒါနဲ့.. တခြားရပ်ကွက်မှာ.. တစ်လ ငါးဆယ်ကျပ်ပေးပြီး အိမ်ငှားနေကြရတယ်..။
အခု.. ဇာတ်ကနေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ.. နေကြရတာပါ..။ မင်းသားလုပ်တဲ့.. ကိုစိုးအောင်က. ကျွန်တော့်ထက်.. ခြောက်နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်..။ အဲဒီတုံးက.. ကျွန်တော့်အသက် ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုတော့..သူက.. ဆယ့်ခြောက်ဆယ့်ခုနှစ် လောက်ရှိပြီ..။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် သိပ်ခင်ကြတယ်..။ အသက်အရွယ် မတူပေမယ့်.. အတော်တွဲကြတယ်..။ သူက မင်းသားလုပ်တာဆိုတော့.. ဇာတ်တိုက်တဲ့နေရာရော.. ဇာတ်ကတဲ့နေရာပါမကျန်.. ကျွန်တော်က.. ကန့်လန့်ကန့်လန့် ပါနေတယ်..။
တကယ်ပွဲကတဲ့ညမှာ.. ကျွန်တော်က.. ဇာတ်ခုံပေါ် တက်ကြည့်တာကိုး..။ အဲဒါကြောင့်.. ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင်.. သိနေတာပဲ..။
ပန်းတံတား.. ပြဇာတ်ကြီးရဲ့.. အမှတ်တရ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းအကြောင်းပြောရဦးမယ်..။
ဇာတ်လမ်းကျောရိုးက.. ပြောခဲ့သလို.. ဂျပန်တော်လှန်ရေး ဇာတ်လမ်းပေါ့..။
လှမြင့်ဆိုတဲ့.. ရွာသားတစ်ယောက်က.. ဘယ်နေရာက ပါရ ပါရ.. ပြဇာတ်ထဲ ပါရ ပြီးရော.. ဆိုပြီး ဒါရိုက်တာကို အတင်းပူဆာတယ်..။ ဒါရိုက်တာကလဲ.. နားအေး ပြီးရောဆိုပြီး.. ဗိုလ်ခွန်နောင်ရဲ့ နောက်လိုက် တော်လှန်ရေး တပ်သားအဖြစ်နဲ့.. သူ့ကို.. ဇာတ်ခွင်ထဲ ထည့်ထားတယ်..။
လှမြင့်ကတော့..ပွဲကမယ့်ညမှာ.. ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီး..သူ့ဇာတ်ဝင်ခန်း ရောက်မယ့်အချိန်ကို.. မျှော်နေတာပေါ့..။ သူ့ဇာတ်ဝင်ခန်းက.. ဂျပန်တွေနဲ့.. မြန်မာ့တော်လှန်ရေးတပ်သားတွေ.. ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲပဲ..။ ညတိုက်ပွဲ..။
ဗိုလ်ကလေး ခွန်နောင်နဲ့.. တပ်သားလေးငါးယောက် ( လှမြင့်အပါအ၀င် ) က.. ကားလိပ်အကွယ်မှာ.. အဆင်သင့် စောင့်နေကြတယ်..။ နောက်ခံပိတ်ကားက.. တောကားတောင်ကား..။ ဆလိုက်မီးတွေ.. အားလုံးမှိတ်သွားတယ်..။ ဇာတ်ခုံတစ်ခုလုံး..မှောင်ကျသွားတယ်..။
" ရွှီး...... ၀ုန်း.. ဒုန်း... ဒိုင်း.. ဒိုင်း.." ဆိုတဲ့.. ဗောက်အိုးဖောက်သံတွေ.. ပေါ်ထွက်လာတယ်..။
" တက်.. တက်.. ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို.. မျိုးဖြုတ်.. ပစ်.. ပစ်.. " ဆိုတဲ့.. အသံတွေ.. အော်ဟစ်နေကြတယ်..။
အမှောင်ထဲမှာ.. တိုက်ပွဲ .. ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြကွက် ..ကို.. ပရိတ်သတ်က.. ၀ိုးတ၀ါး မြင်နေရတယ်..။
"ဟာ.. လှမြင့်.. တိုက်ပွဲကျသွားပြီ.. ဗိုလ်လေးခွန်နောင်.. လှမြင့်ကို.. မတွေ့တော့ဘူး.. တိုက်ပွဲကျကျန်ခဲ့ပြီ.. " ဆိုတဲ့.. အသံ ထွက်လာတယ်..။
နောက်မကြာဘူး.. တိုက်ပွဲပြီးသွားတယ်..။ ဆလိုက်မီးတွေ ပြန်မဖွင့်ခင်.. လှမြင့်ကို.. "မင်းသေသွားပြီ.. တိုက်ပွဲကျသွားပြီ.. မင်း လူလုံးပြလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ.. " ဆိုပြီး ဒါရိုက်တာက.. ဇာတ်ခုံနောက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်..။ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ရရှာတဲ့ လှမြင့်ကတော့.. သူ့ကို.. ပေးသေတဲ့.. တပ်သားအောင်စိုးဝင်းကို.. ပညာပေးဖို့ ချောင်းနေတယ်..။
လှမြင့် တိုက်ပွဲကျသွားတဲ့အကြောင်း မိုက်နားကပ်ပြီး မှောင်ကြီးမဲမဲမှာ.. အောင်စိုးဝင်းက.. အော်တာကိုး..။
တိုက်ပွဲဇာတ်ဝင်ခန်း..ပြီးသွားတာနဲ့.. ကားလိပ်ချတယ်။ ကားလိပ်နောက်က.. စောင့်နေတဲ့.. လှမြင့်က.. အောင်စိုးဝင်းကို.. ၀င်လုံးတယ်..။ မင်းကြောင့်.. ငါအစောကြီးသေရတာဆိုပြီး.. ထိုးကြကြိတ်ကြနဲ့.. လိုက်ကာနောက်မှာ.. ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေကြတယ်..။ ဒါရိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေက.. ရန်ပွဲကို ဖျန်ဖြေဖို့ ကြိုးစားကြတယ်..။ ကားလိပ်ကြီးက.. ဟိုဖက်လှုပ်လိုက် ဒီဖက်ရွေ့လိုက်နဲ့.. ဖြစ်နေတယ်..။ အောက်ကပရိတ်သတ်က.. ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတဲ့.. စိတ်နဲ့..ကားလိပ်ကြီးကို.. ကြည့်နေကြတယ်..။
နောက်ဆုံး.. ကားလိပ်အတင်အချလုပ်တဲ့ ဆရာက..သူ့ကားလိပ် စုတ်ပြဲမှာ စိုးတာနဲ့.. ကားလိပ်ကြီးကို ဆွဲတင်လိုက်တယ်..။
ဘာပြောကောင်းမလဲ.. လှမြင့်နဲ့ အောင်စိုးဝင်းတို့ရဲ့ ရန်ပွဲကို.. ပရိတ်သတ်.. လိုက်ဖ်ကြည့်ခွင့်ရသွားတယ်..။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေပါ.. စင်ပေါ်တက်လာပြီး.. ဖျန်ဖြေမှ.. ပွဲပြီးသွားတယ်..။
ကဲ.. သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်အကြောင်းတော့.. ဒီလောက်နဲ့.. ခနရပ်ထားမယ်..။
Posted by navana at 5:32 PM
ကျုရှင်ဆရာလေး ကျွန်တော့်ဘ၀ ကို ပြောအုံးမှပဲ..။
တက္ကသီလာ မြကျွန်းသာက.. အရူးမလက်ထဲက.. ထီးလို.. ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ဆိုတော့.. ကျွန်တော်မျိုးလဲ.. ရွာပြန်လိုက်.. တက္ကသိုလ်တက်လိုက်နဲ့.. အဲဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ.. အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်..။
ရွာပြန်ကျုရှင်ပြ.. တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ခါနီး တပည့်တွေ စုပေါင်းကန်တော့တဲ့..ပိုက်ဆံလေး စုပြီး.. ကျောင်းသွားတက်လိုက်ပေါ့..။
ကျုရှင်က.. ဆယ်တန်း.. ဓါတုဗေဒ ..သင်တာပဲ..။ ကျုရှင်ဆရာလေးက.. ရုပ်ကလေးကချော အပြောကလေးကောင်း ဆိုတော့.. သိပ်အောင်မြင်တာပေါ့.. ( အဟတ်ဟတ်.. )
ကျုရှင်ကျောင်းကတော့.. ရွာဘုရားကုန်းပေါ်ပေါ့..။ ဘုရားတန်ဆောင်းတစ်ခုမှာ.. ဘလက်ဘုတ် ထောင်ပြီး သင်တာပဲ..။ နေရာထိုင်ခင်းက.. သိပ်ကောင်းတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. တပည့်ကျော်တွေ ပေါက်ကရလုပ်တာလေးတွေတော့ ဘုရားလူကြီးနဲ့ ရှင်းရလေ့ရှိတယ်..။
စာသင်တဲ့.. တန်ဆောင်းထဲက.. ဆင်းတုတော်ကို..ပါးကွက်ကွက်ပေးထားလို့.. ဘုရားလူကြီးကို.. မနည်းတောင်းပန်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီဘုရားလူကြီးနာမည်က.. ဦးမြအောင်လို့ခေါ်တယ်..။
သူ့မှာ သားတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ ဖိုးပါလို့ခေါ်တယ်..။ ရွာမှာမနေဘူး..။ ဖိုးပါက.. မန္တလေးမှာ..နေတယ်..။ ဦးမြအောင်က.. သူ့သားဆီရေးတဲ့စာကို.. ကျောင်းသားတစ်ယောက်က.. ကောက်ရလာတယ်..။ ကျွန်တော်စာသင်နေတုံး ကျောင်းသားတွေ.. ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်နဲ့.. ရယ်နေကြလို့.. စာသင်တာရပ်ပြီး.. မေးကြည့်တော့.. ကောက်ရလာတဲ့.. စာကို.. ကျွန်တော့်ပေးဖတ်တယ်..။ သူတို့ရယ်တာလဲ.. မလွန်ဘူး..။
ဦးမြအောင်က.. သူ့သားကိုပေးတဲ့စာ အစမှာ..
.. ဆိုတာနဲ့.. အစချီထားတာကိုး..။
ဦးမြအောင်ရယ်.. မြသီက ရှင့်သားဦးသွားပြီလို့ ပြောခံထိတဲ့.. ဦးထွန်းရီရယ်.. မိုက်စိန်ကျော်တို့သုံးယောက်က.. ရွာဘုရားကြီးရဲ့ ဂေါပကတွေပေါ့..။ တစ်နှစ်မှာဆယ့်နှစ်လလောက်.. အလှူခံကြတယ်..။ ကျွန်တော်က ကျုရှင်သင်တယ်..။ သူတို့က.. အသံချဲ့စက်နဲ့.. အလှူခံတရားတွေ အော်တယ်..။ ကြာတော့.. ကျွန်တော်တောင်.. သူတို့ဟောတဲ့.. တရားတချို့ အလွတ်ရသွားတယ်..။
မောင်ကာက နဲ့ မယ်ကာက.. ဆိုတဲ့ တရားကို.. ဦမြအောင်က.. အခုလို အော်လေ့ရှိတယ်..။
" အမေ.... သား.. မိန်း မ မလို ... ချင်သေးပါဘူး.. အမေရဲ့.."
အဲဒီလို.. မောင်ကာက ကပြောလိုက်တဲ့ အခါမှာ..
" ငါ့သား... သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရတယ်ကွဲ့.. ငါ့သားရဲ့.. မိဘ၀တ်တရားမှာ တပါးအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့.. ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုတဲ့ ၀တ္တရားကို.. အမေတို့ ကျေပါရစေကွဲ့.. "
မောင်ကာကရဲ့ မွေးသမိခင်က.. အဲဒီလို ပြောတယ်ဆိုရင်ပဲ.. မောင်ကာက လေးက..
" အမေ.. ရွှေရုပ်ကလေးနဲ့တူတဲ့.. မိန်းမကို ရရင်ဖြင့် .... ယူ.. မယ်.. "
.. သံနေသံထားနဲ့ ဘုန်းကြီးလေသံအတိုင်း.. အော်တာပဲ..။ နေ့တိုင်း ဒါပဲ အော်နေလေတော့.. ကျွန်တော်တင်မက.. ကျုရှင်ကျောင်းသားတွေပါ.. အလွတ်ရကုန်တယ်..။
တချို့ ခပ်နောက်နောက်ကျောင်းသားတချို့က.. ကျွန်တော့်တွေ့တာနဲ့..
" ဆရာ.. သား.. မိန်းမ.. မလိုချင်သေးဘူး ဆရာရဲ့.."
" အပျော်ကြံမယ့်.. မိန်းမကို တွေ့ရင်ဖြင့်.. ယူမယ်.. " လို့ .. စလေ့ရှိတယ်..။
" ငါ့ တပည့်.. ဆရာလည်း မင်းလို ဘဲ.. " လို့ ကျွန်တော်ပြန်နောက်လေ့ရှိတယ်..။
တစ်ရက်ကျွန်တော်စာသင်နေတုံး.. ဂေါပကလူကြီးတွေ.. အလှူခံငွေစာရင်းရှင်းတမ်း လုပ်တယ်..။ အသံချဲ့စက်ကြီးနဲ့.. တစ်ရွာလုံးကြားအောင် အော်တာပဲ..။
ဘုရားကြီးအတွက်.. ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်အထိ.. အလှူကောက်ခံရရှိငွေက.. ဘယ်လောက်.. ဘုရားကြီး ကျောက်ပြားခင်း.. မှန်စီရွှေချတာက.. ဘယ်လောက်.. ။ အသံချဲ့စက် ငှားခက.. ဘယ်လောက်..။ စာရင်းပိတ်သော်.. ကြွေးအစိတ်တင်နေတယ်.. လို့.. ဦးစိန်ကျော်က.. အသံကုန်ဟစ်တယ်..။
ကျွန်တော်တို့မှာ.. ရယ်လိုက်ရတာ..။ ဘုရားကြီးမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း.. အကြွေးတင်နေသလိုမျိုး ဖြစ်နေတာကိုး..။ ဘုရားကုန်းဘေးမှာ.. ဦးရွှေတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်..။
သူတို့က.. လင်ကိုမယား နှစ်ယောက်တည်းနေကြတယ်..။ ဦးစိန်ကျော်မိုက်နဲ့ အော်တဲ့.. ဘုရားကြီးကြွေးအစိတ်တင်နေတယ်ဆိုတာကြားတော့.. ဦးရွှေက..သူ့မိန်းမကို..
" မိန်းမရေ.. တို့နှစ်ယောက်က.. စားစားသောက်သောက်နဲ့.. ကြွေးငါးဆယ်တင်တာ.. ဘာဟုတ်သေးလဲ.. ဘုရားကြီးမှာတော့.. မစားမသောက်နဲ့ တစ်ပါးတည်း.. ကြွေးအစိတ်တင်နေသတဲ့.. တို့ထက် တောင်ဆိုးသေး.. " လို့ ပြောတယ်..။
ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျုရှင်ဆရာပေါက်စ..။ တပည့်တွေက.. ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေ ဆိုတော့.. အသက်က ကွာလှ သုံးနှစ်ပေါ့..။ ဆရာတပည့် ဆက်ဆံရေးထက်.. သူငယ်ချင်း ခင်မင်မှုမျိုးနဲ့ပဲ နေဖြစ်တယ်..။
ကျုရှင်အားတဲ့အချိန်.. တခါတရံ မြစ်ထဲသွားရေသွားချိုးလေ့ရှိတယ်..။ ဆရာတပည့် တအုံတမကြီးပေါ့..။ ကျောင်းသူတွေတော့.. ဘယ်ပါမလဲ..။
ရွာမြစ်ဆိပ်က.. အရမ်းသာယာလှပတယ်။ မီတာသုံးလေးရာလောက်ရှိတဲ့.. သဲသောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်..။ ညနေ ညနေဆိုရင် အရမ်းစည်တယ်..။ ကုမ္မာရီ သမီးပျိုလေးတွေ ရေခပ်ဆင်းတဲ့အချိန်ပေါ့..။ ကျွန်တော်တို့ကတော့.. ဟိုငေး ဒီငေး ဟိုငမ်း ဒီငမ်းရင်း သောင်ပြင်မှာ အချိန်ဖြုန်းတယ်။
ညနေစောင်းလို့ ပြန်ခါနီးရင် မြစ်ထဲရေဆင်းချိုးကြတယ်။ တစ်ရက် ဆရာတပည့်တတွေ ရေလဲလုံချည် တစ်ထည်ထဲနဲ့ ရေချိုးဖို့ကြံကြတယ်။ ရှိတဲ့ ရေလဲပုဆိုးလေးဝတ်ပြီး ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး ရေထဲဆင်းတယ်။ ရေနက်ပိုင်း ခါးမြုပ်လောက်တဲ့ နေရာရောက်မှ အဲဒီပုဆိုးချွတ်ပြီး ကမ်းပေါ်ပြန်ပစ်ပေးလိုက်တယ်..။
ကျွန်တော်ပြန်ပစ်ပေးလိုက်တဲ့ ရေလပုဆိုးကို ၀တ်ပြီး နောက်တစ်ယောက် မြစ်ထဲဆင်း...။ အဲဒီလူက ရေနက်ပိုင်းရောက်တာနဲ့ ပုဆိုးချွတ်ပြန်ပစ် ..။ အဲဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့.. တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရေထဲဆင်း ကဲနေကြတယ်။
" ဆရာ ဆရာ.. ရေထဲမှာ ထဆင်ထူး ရေးတတ်လား.." လို့ မေးတယ်။
ကျွန်တော်က မရေးတတ်ဘူး လို့ ပြန်ဖြေတော့.. ကျွန်တော်ရေးတတ်တယ်.. ရေးပြရမလား ဆိုပြီး.. ပေါက်တတ်ကရလုပ်ပြတယ်..။
ကျွန်တော်တို့မှာ ရယ်လိုက်၇တာ..။ ကဲကြည့်ကြ.. ရေထဲမှာ ထဆင်ထူး ဒီလိုရေးရတယ်ဆိုပြီး သူ့ဖင် ကွက်ကွက်ကလေးကို.. ရေပေါ်မှာပေါ်အောင် ကုန်းပြတော့တာပဲ..။
အခုတော့ ရေထဲထဆင်ထူးေ၇းပြတဲ့ တပည့်က ရွာမှာ ကျုရှင်ဆ၇ာ ပြန်လုပ်နေတယ်။ သူ့နာမည်က အေးအေးမင်းလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီကောင်က သိပ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်းပြုံးနေတာပဲ။ လူချစ်လူခင်သိပ်ပေါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရေချိုးနေတုံး သန်းထွန်း ဆိုတဲ့ တပည့်က အေးအေးမင်းနဲ့ အလောင်းအစားလုပ်တယ်။
အေးအေးမင်းကို.. မင်းရေထဲမှာ..သုံးမိနစ်လောက် ငုပ်နေနိုင်မလားလို့ သန်းထွန်းက မေးတယ်။ ငုပ်နိုင်တာပေါ့ လို့ အေးအေးမင်းက ပြောတော့.. သုံးမိနစ်စေ့လို့ ရေပေါ်ပြန်ပေါ်လာလာခြင်း.. ငါ့နာမည်ကို.. အကျယ်ကြီး မင်းမအော်နိုင်စေရဘူး လို့ သန်းထွန်းက ပြောတော့.. ဒါလေးများ ဘာခက်တာမှတ်လို့ ဆိုပြီး လောင်းကြတာပဲ။
အေးအေးမင်း ရေထဲ စငုပ်သွားတယ်။ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်.. အေးအေးဆေးဆေးပေါ့..။ သုံးမိနစ်စေ့ခါနီးမှာ.. သန်းထွန်းက..
"ဟေ့.. အေးအေးမင်း... မင်းအဖေ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲကွ.. " လို့ မေးတယ်။ ရေထဲငုပ်နေတဲ့ အေးအေးမင်းကတော့ ဘယ်ကြားမလဲ..။
အဲဒါကို မသိတဲ့ အေးအေးမင်းက.. သုံးမိနစ်စေ့လောက်တာနဲ့.. ရေပေါ်ဘွားကနဲ ခေါင်းဖော်ပြီး..
" သန်းထွန်း " လို့ အသားကုန်အော်တော့တာပဲ..။
သူ့ကို သက်သက်မဲ့ သန်းထွန်းက နှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုတာကို နောက်တော့ အေးအေးမင်း သိသွားတယ်..။ ရေချိုးပြီးတော့လဲ.. ရေဆင်းချိုးတုံးကလို.. ရေလဲပုဆိုး ချွတ်လိုက်ပစ်လိုက်နဲ့.. တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်.. တက်ကြတယ်။ သန်းထွန်းက.. နောက်ဆုံးမှ တက်ရတယ်။ သူ့ရှေ့က အေးအေးမင်းတက်တယ်။ ရေလဲပုဆိုးချွတ်ပြီး သန်းထွန်းကို ပစ်ပေးရမှာကို အေးအေးမင်းက မပေးတော့ဘဲ.. အဖေခေါ် ခိုင်းတယ်။
အဖေမခေါ်ရင်.. ရေလဲပုဆိုးမပေးဘူးလို့ အကျပ်ကိုင်တယ်..။ ဆယ်မိနစ်လောက် သန်းထွန်းက ပေကပ်ကပ်လုပ်နေသေးတယ်..။ နောက်တော့.. ရေစိမ်ပွဖြစ်မယ့်ဒဏ် မခံနိုင်တာနဲ့ အဖေခေါ်လိုက်ရတယ်..။
Posted by navana at 5:44 PM
ထမင်းကို မိုးဗြဲဒယ်ကြီးတွေနဲ့ ချက်တယ်..။ အပေါ်က ဂုန်နီအိတ်စုတ်ကြီးနဲ့ အုပ်ပြီး နှပ်တယ်။ ထမင်းထဲ ရောပါလာတဲ့ ဂုန်နီအိတ်စကို အမဲသားမျှင် ထင်ပြီး ၀ါးဖူးသေးတယ်။
ထမင်းစားခန်းမှာ ခင်ရာခင်ရာ သူငယ်ချင်းတွေ စုထိုင်ပြီး စားလေ့ရှိတယ်။ အကြော်အလှော် အခြောက်အခြမ်းလေးတွေ ဖလှယ်စားရင်းပေါ့..။ ကျောင်းအသစ် ဆိုတော့ ထမင်းချက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလဲ အသစ်တွေပဲ။ သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးတော့ ပျော့တူးမနပ်ဖြစ်တာတွေ မကြာခန ကြုံရတယ်။
ဟင်းဆိုရင်လဲ ကြိုချက်ထားတာပဲ။ ဥပမာ ငါးဟင်းဆိုရင် ငါးကို အရင်ကြော်ထားတယ်။ ဟင်းအနှစ်ကို သီးသန့်ချက်တယ်။ စားခါနီးမှ ငါးကြော်တစ်တုံးကို ဟင်းအနှစ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တာပဲ။
တစ်ခါတုံးက ကြော်သိမ်းထားတဲ့ ငါးကြော် ဒိတ်လွန်ပြီး လောက်(ကောင်) ပါလာတယ်။ အဲဒီ လောက် ပါတဲ့ ဟင်းခွက်က ကံဆိုးပြီး ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းလာကျတယ်။
ထမင်းစားတာ ရပ်ပြီး ကျောင်းသားအားလုံး လောက်ပါတဲ့ဟင်းခွက်ကိုင်ကာ ပါမောက္ခချုပ်ဆီ ချီတက်ကြတယ်။ ထမင်းစားဆောင်နဲ့ ပါမောက္ခအိမ်က အတော်ဝေးတယ်။ လမ်းမှာ လောက် က ဟင်းခွက်နခမ်းပေါ် တက်လာလို့ ပြန်တွန်းချရသေးတယ်။
ပါမောက္ခအိမ်ရောက်တော့ အဆောင်မှုးပါ အဆင်သင့်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပစ္စည်းသက်သေ လူသက်သေ အစုံအလင်ပဲ ။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့။ ဟင်းခွက်ထဲ လောက်ပါလာတဲ့အကြောင်း ပါမောက္ခချုပ်ကို ပြောနေချိန်မှာ အဆောင်မှုးခမျာ မျက်နှာကြီးကို မဲလို့။ ပါမောက္ခချုပ်ကတော့ အဆောင်မှုးကိုပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်တင်တယ်။ ကျောင်းသားတွေရှေ့မှာ မို့လို့လားတော့ မသိဘူး။
တစ်လက်စထဲ အဆောင်ရေမလာတာ.. အိမ်သာတွေ ပိတ်နေတာ.. တီဗွီမရှိတာ.. စတဲ့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ၀ိုင်းပြောကြတယ်။
အားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေရမယ် ဆိုတဲ့ ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ ကတိနဲ့ ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
Posted by navana at 2:44 PM
အဆောင်မှုးခမျာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုးပေတဲ့ဒဏ် အတော်ခံရတယ်...။
သူစီးတဲ့ E2000 ကားကို ညမှာ ဂီယာဖြုတ် ၀ိုင်းတွန်းပြီး တောထဲ သွားထားကြတယ်။ ကျောင်းက ဧက ခုနှစ်ရာတောင် ကျယ်တယ်..။ တကယ့်တောကြီးထဲမှာပဲ..။
ညဦးပိုင်း အဆောင်မှုးက ပုတီးစိတ်ဘုရားရှိခိုးတယ်..။ အစိန္တေယျ.. အပ္ပမေယျ.. အစိန္တေယျ အပ္ပမေယျ.. လို့ ရွတ်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ က သူ့တံခါးပေါက်နားက နေပြီး.. " အစိမ်းတွေရ.. အ၀ါတွေရ..အပြာတွေရ " နဲ့ အော်ပြီး ပြေးကြတယ်..။
ပျင်းပျင်းရှိရင်.. မိန်းဘရိတ်ကာ ကြီး ချပြီး အဆောင်မှုးကို ကလော်တုတ်ကြတယ်..။ အဆောင်မှုးကတော့ ရိုးရိုးသားသား မီးပျက်တယ် ထင်တာပဲ..။ ဒါပေမယ့်သူလဲ နင်ပဲငဆ ကလော်တုတ်ခံရတော့ သည်းမခံနိုင်ဘူး..။
ပြန်ကလော်တုတ်တာပဲ။ " မီးပျက်တာ.. ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လဲကွ.. မအေပေးတွေ.. မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ သားတွေ .. နွားတွေ.. " နဲ့ သူကလဲ ကြမ်းတယ်။ သူ ဆဲပြီးတာနဲ့.. ကျောင်းသားတွေကလဲ အားကျမခံ.. " ဟေ့.. အဆောင်မှုး.. ခင်ဗျားသာ နွားကြီး " နဲ့ ပြန်အော်ကြတယ်..။
အမျိုးသမီးဆောင်က အမျိုးသားဆောင်နဲ့ အတော်လှမ်းတယ်..။ ညပိုင်း အမျိုးသမီးဆောင်ရှေ့ ဂစ်တာသွားတီးဖို့ ဆိုတာ.. အတော်အားထုတ်ရတယ်။ နည်းနည်းအမျှော်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ သွားကြတာပဲ..။ ကျွန်တော်တို့ ငပြောင်အဖွဲ့ကတော့ အဆောင်မှုးနေတဲ့ အခန်းနား သွားပြီး ဂစ်တာတီးကြတယ်..။
အဆောင်မှုးနာမည်မှာ ချစ် ဆိုတာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကွယ်ရာမှာ ကိုကိုချစ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုတဲ့သီချင်းက ဖိုးချိုရဲ့ အဆောင်သရဲ..။
"အမ်အိုင်တီ (MIT) နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကြားဖူးတယ်.. "
" ပုံပြင်ထဲက ဇာတ်လိုက်ကြီး.. ကိုကိုချစ်လို့ မပြောပါနဲ့... "
... ..... .... "အခု တော့.. ရှော သွားပြီ.. အခုတော့ ရှောသွား ပြီ.. " နဲ့ ၀ိုင်းအော်ကြတယ်။ ပြီး.. ထွက်ပြေးကြတယ်။
အဆောင်ကြေးက တစ်လ လေးရာကျပ်။ ကျောင်းပိတ်ရင် refund ပြန်ပေးလေ့ရှိတယ်။ တစ်လ လေးရာတောင် မကုန်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ခါနီး refund မျှော်တဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်က ထိပ်ဆုံးကပါတယ်။
တစ်ရက် အဆောင်မှုးအခန်းရှေ့က နို့တစ်ဘုတ် မှာ.. "ယနေ့ ညနေ ခြောက်နာရီ မန်ကညိ ပြန်ပေးမည်.. ပုံ အဆောင်မှုး " လို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က နောက်ရေးထားတယ်။
အိတ်လေးဆွဲပြီး ရုံးဆင်းလာတဲ့ အဆောင်မှုးက ကျောင်းသားတွေ စုရုံးစုရုံးနဲ့ နို့တစ်ဘုတ်ရှေ့ မှာ ရပ်နေတာတွေ့တော့ သူလဲ ၀င်ဖတ်တယ်..။ ရေးထားတဲ့ စာဖတ်ပြီး အခုလို မှတ်ချက်ပေးတယ်..။
"ရေးတဲ့ကောင် နှမ ဖာခံပြီး ပေးချင်ပေးမှပဲ.. " တဲ့ဗျား။
မိန်းကလေးဆောင်ရှေ့ ညည သီချင်းသွားဆိုတဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခု မျှဝေရဦးမယ်..။
ရန်ကင်းတောင်အရှေ့ဖက်.. ကျောင်းကနေ.. စနေ တနင်္ဂနွေဆို မန္တလေးမိန်းထဲ သွားလည်လေ့ရှိတယ်..။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဆေးကျောင်းတက်နေတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ.. သူ့ဆီမှာ ည ၀င်အိပ်တယ်။
အဲဒီငနဲက ဂစ်တာတီးသိပ်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က ဗော်ကယ်မိုက်တယ်။ သိပ်အတွဲညီတယ်။ မန္တလေးမိန်း ပတ်ဝန်းကျင်က အမျိုးသမီးဆောင်တွေဆီ ဂစ်တာကိုင်ပြီး ညရှစ်နာရီခွဲလောက် ချီတက်ကြတယ်။ တခြားသူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက်လဲ ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညက မီးပျက်နေတယ်။ ကိစ္စမရှိ..။ ထိုင်လို့ကောင်းမယ့်နေရာရွေးပြီး ဂစ်တာသံနဲ့ တေးကျုတယ်..။
"အိမ်နဘေးက သစ်ပင်မှာ ငှက်ဆိုးထိုးသံတွေ.. ကြားရတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ.. " ဆိုတဲ့ ထီးဆိုင်သီချင်းနဲ့ စဖွင့်တယ်..။ ဆက်တိုက် ဆိုတယ်..။ တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ် သုံးပုဒ်.. ပြီးသာသွားတယ်.. အဆောင်ထဲက တုန့်ပြန်မှု မတွေ့ရဘူး..။ ကြည့်ရတာ.. အဆောင်ထဲက မိန်းမတွေ.. ကျွန်တော်တို့ ဂီတရေယာဉ်ကြောမှာ မျောပြီး အိပ်ပျော်သွားပြီနဲ့ တူတယ်လို့တောင်တွေးမိတယ်။
အဲဒါနဲ့ ခင်မောင်တိုး သီချင်းပြောင်းဆိုတယ်...။
" ဒီတစ်ညတော့ .. .. မင်းရင်ခွင်မှာ.. အိပ်ဖို့ရောက်လာပြီ.. အချစ်ကလေးရယ်.. တံခါးဖွင့်တော့လေ... "
အေးအေးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဆိုနေတုံး.. အဆောင်တံခါး တစ်ချပ် ပွင့်လာတယ်..။ လူရိပ်တစ်ခု မြင်လိုက်ရတယ်။ ဓါတ်မီးရောင် ၀င်းကနဲ လက်သွားတယ်..။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး .. ဟာ.. ကနဲ ဖြစ်သွား ခဲ့ကြတယ်။
ပြတင်းပေါက်မှာ ငနဲတစ်ကောင်က ပုဆိုးလှန်ပြီး သူ့ပစ္စည်းကြီးကို ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးပြနေတာကိုး...။
မိန်းကလေးဆောင်အထင်နဲ့.. အပီကြွေနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တတွေ မောင်မင်းကြီးသား ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးပြမှပဲ ယောက်ျားလေးဆောင်မှန်းသိတော့တယ်။
Posted by navana at 3:04 PM
ကျောင်းမှာ အချစ်ကြီးချစ်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ သူတို့ သိပ်ချစ်ကြတယ်။ သိပ် အဖြစ်သည်းကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သမီးရည်းစား ဖြစ်သွားခဲ့ပုံကတော့ သင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။
ကောင်မလေးကို.. ကောင်လေးက စာပေးခိုင်းလိုက်လို့ဆိုပြီး ကြားထဲက ကျွန်တော်တို့စာတစ်စောင် လုပ်ကြံရေးပြီး သွားပေးလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကို စာပေးပြီးမှ ကောင်လေးကို ပြောပြလိုက်တယ်။
" အေး .. အဲဒီကောင်မလဲ မဆိုးပါဘူး.. ကြိုက်ပျော်တယ် " .. လို့ မောင်မင်းကြီးသားက ဆိုတယ်။ သိပ်မကြာဘူး.. သူတို့ကြိုက်သွားကြတယ်။ အတူသွား အတူလာ အတူစားပေါ့။
အမျိုးသမီးအဆောင်ပိတ်မှ.. သကောင့်သား ပြန်တယ်။ နှေးတုံ့လေးကန် ခြေလှမ်းများနဲ့ပေါ့။ နောက်တော့ တရုတ်ကလာတဲ့ ဝေါ်ကီတော်ကီ နှစ်လုံးဝယ်လိုက်ကြတယ်။
အဆောင်ပိတ်သွားသည့်တိုင်.. "အချစ်.. ကြားလား.. မောင်ပါ.. ကြားရင် အကြောင်းပြန်.. အာ.. ဗွား.." လုပ်နေကြတယ်။
မောင်မင်းကြီးသား အိပ်ပျော်နေတဲ့ တစ်ရက်.. သူ့ဝေါ်ကီတော်ကီ ခိုးပြီး ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတတွေ အမျိုးသမီးဆောင်ကို ချီတက်ကြတယ်..။
"အချစ်.. မောင်ပါ.. အာ.. ဗွား.. " တစ်ယောက်တစ်လှည့် မယ်မင်းကြီးမကို ရည်းစားစကားပြောကြတယ်။ ဝေါ်ကီတော်ကီအသံကလဲ..ခပ်ညံ့ညံ့ဆိုတော့.. ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆက်နေမှန်း မသိဘူး..။
"အချစ်ရေ.. မနက်ဖန်မနက်.. လေးနာရီလောက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပစေ.. ဘုရားကြီး မျက်နှာတော်သစ်အမီ သွားကြမယ်.. ဆက်ဆက်စောင့်နေ မောင်လာခေါ်မယ်.." လို့ ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ဘုရားကြီးဆိုတာ.. မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကို ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကနေ အစောကြီးသွားမှ မျက်နှာတော်သစ်မီတယ်။
မောင်မင်းကြီးသားကတော့ ဘယ်သိမလဲ..။ ကိုးနာရီလောက် နေဖင်ထိုးမှ အိပ်ရာထတယ်။ အစောကြီးထ ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီး မောင်တော် လာအခေါ်ကို မျှော်နေတဲ့.. မယ်မင်းကြီးမကတော့ ဒေါသအလိပ်လိပ်နဲ့ပေါ့..။ သူ့ရည်းစားကို.. ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပေါင်းရင်.. အပြတ်ပဲ .. လို့ကြိမ်းကြောင်း နောက်မှ ပြန်ကြားရတယ်။
ကျောင်းပြီးတော့ သူတို့ ညားသွားတယ်။ အခုတော့ ကလေးတစ်ယောက် နဲ့ ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ..။ အစိုးရ အရာရှိတွေပေါ့.။
မောင်မင်းကြီးသားက မကြာခန ရန်ကုန်လာလေ့ရှိတယ်..။ သူငယ်ချင်းတွေ.. တွေ့ကြ ဆုံကြ.. သောက်ကြ မျိုကြ.. အော်ကြဟစ်ကြ ပေါ့..။ သူလာရင် ကျွန်တော့်ဆီ ဖုံးဆက်ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
ဘီယာဆိုင် တဆိုင်ဆိုင်မှာ အရင်စားသောက်ကြတယ်။ နောက်တော့ ကာရာအိုကေပေါ့..။ ပြီးတော့ ပြီးတော့.. ထိုနောက် ထိုနောက်မှာပေါ့ဗျာ.. ဟဲဟဲ။
ဒါပေမယ့် သူ့မိန်းမက တစ်နာရီတစ်ကြိမ်လောက် သူ့ယောက်ျားဆီ ဖုန်းဆက်နေတော့တာပဲ။ အခုဘယ်ရောက်နေပြီ.. ဘယ်သူတွေနဲ့.. ဘာလုပ်နေတယ်.. သတင်းပို့နေရတယ်။
ကာရာအိုကေ အော်ကောင်းနေတုံး သူ့မိန်းမဆီက ဖုံးလာတယ်။
" ရှင်.. ဘာလုပ်နေလဲ.. "
" တီဗွီ ကြည့်နေတယ်.. "
" အဲဒါဆို တယ်လီဖုံးကို တီဗွီနား ကပ်ပြ.. "
" အေး.. ဟာ.. မီးပျက်သွားပြီ.. "
" ရှင်သက်သက် လိမ်တာပဲ.. ကျမသိတယ်.. မဟုတ်တဲ့ တနေရာရာ ရောက်နေပြီမဟုတ်လား.. "
" မင်း ထင်ချင်သလို ထင်ကွာ.. ဒါဘဲ.. "
ဆိုပြီး မောင်မင်းကြီးသား ဖုံးချပစ်လိုက်တယ်။ ပါဝါ ပါ ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။
တချိန်တုံးကတော့.. အဆောင်ပိတ်သွားတာတောင် ဝေါ်ကီတော်ကီ နဲ့ အာ ဗွား လုပ်နေခဲ့သူတွေ.. အခုတော့..
အချစ်ဆိုတာ.. အဲဒါမျိုးလားတော့ မသိဘူး။
Posted by navana at 3:08 PM
ကျွန်တော်တို့က မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပထမအသုတ်ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ နည်းနည်း ဗိုလ်ကျ ချင်ကြတယ်။ ကျောင်းမှာ စီနီယာ ကျောင်းသားကြီးများ စတိုင်နဲ့ပေါ့..။
တတိယနှစ်လောက်ရောက်တော့.. ကျောင်းသားဦးရေကလဲ နည်းနည်းများလာခဲ့ပြီ..။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးအလွန်နည်းတဲ့ကျောင်းဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေပဲ များလာတာပါ..။ ရှိသမျှ ကျောင်းသူတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က သေချာသိတယ်..။ ဒီ မဒီကလေးက.. ဖရှက်ရှာကလေး.. ဒီဝတုတ်ကြီးက ဒုတိယနှစ်က နဲ့ .. မြင်တာနဲ့ သိတယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေကိုတော့ သေချာမသိတော့ဘူး..။ ကိုယ့်အတန်းတူ မဟုတ်ရင် ကျောင်းသားသစ်ပဲ လို့ အလွယ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ရက် အဆောင်ရေကန်မှာ ငနဲတစ်ပွေ ရေချိုးနေတယ်..။ ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူး.. မျက်နှာသစ် ခရင်မ်.. စတဲ့ ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ပေါ့..။
အဆောင်ရေကန်ကို.. ဘယ်ကျောင်းသားမှ.. ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူး ယူမလာရဲဘူး..။ အားလုံးက.. ၀ိုင်းသမလိုက်ရင်.. ဗူးအခွန်ယူပြီး ပြန်သွားကြရတာချည်းပဲ..။ အခုလဲ.. ဘဲတစ်ပွေ.. ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူးနဲ့.. ရေချိုးနေတာကို မြင်တဲ့.. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့.. ရေချိုးဖို့ ကမျောသောပါး ဆင်းလာကြတယ်..။
ရေကန်နားရောက်တော့.. ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျွန်တော်တို့ မသိ..။ ကိစ္စမရှိ..။ ဂျုနီယာလေးနေမှာပဲ လို့ အားလုံးက တွေးလိုက်ကြတယ်..။ ပြီးရေစချိုးတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ထဲက စိုးထွန်းက စပြီး.. "ညီလေး.. ခေါင်းနည်းနည်းလျှော်မယ် " ဆိုပြီး.. ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူးကို ယူလိုက်တယ်..။
ငနဲက မျက်လုံး လှန်ကြည့်ပြီး.. "လျှော်" လို့.. ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်..။
ပြီးတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခပ်မြန်မြန် ခေါင်းလျှော်ကြတယ်...။ ငနဲကတော့.. ခပ်တည်တည်မျက်နှာပေးနဲ့ ရေဆက်ချိုးနေတယ်..။
ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်တော့.. ခေါင်းလျှော်ရည်ဗူးကို.. လက်လှမ်းရင်း .. "မင်းက ဘယ်ကလဲ ကွ.. " လို့ မေးလိုက်တယ်..။ မျက်နှာထားတင်းတင်းကြီးနဲ့ "ငါ.. ရန်ကုန်က " လို့ သူက ပြန်ဖြေတယ်..။
အဲဒီမှာ.. ပြဿနာပေါ်တော့တာပဲ..။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားအများစုက.. မန္တလေးတောကြို တောင်ကြားက..ကျောင်းမှာ တက်နေရလို့.. အားလုံးက.. စိတ်အချဉ်ပေါက် နေကြတယ်..။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရန်ကုန်ကျောင်းကို.. ပြောင်းချင်နေကြတယ်..။ အခုလို.. ရန်ကုန်ကျောင်းကနေ.. မန္တလေးကို.. ပြောင်းလာတဲ့ ငနဲကို.. အထူးအဆန်း သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်လို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က သဘောထားတယ်..။
"ဟာ... မင်းလောက်မိုက်တဲ့ကောင်.. မရှိဘူး... ဒီလို တောကြိုအုံကြား ကျောင်းကို .. မင်းမို့ ရန်ကုန်ကနေ ပြောင်းလာတယ်.. မိုက်လိုက်တဲ့ ကောင်.. "
လို့.. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က..ပါးစပ်ကြီးအပြည့်နဲ့ ၀ိုင်းသမတော့တာပဲ..။ ဒါပေမယ့်.. အဲဒီငနဲရဲ့.. တုန့်ပြန်တဲ့ .. စကားတစ်ခွန်းက.. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို.. ကြက်သေသေသွားစေခဲ့တယ်..။
"ဟေ့ကောင် တွေ.. ငါက ဆရာကွ.." တဲ့..။
( လက်စသတ်တော့.. ရန်ကုန်က ရောက်လာတဲ့ ဆရာအသစ်ကလေးကိုး.. )
အဲဒီလိုမျိုး ဆရာကို ကျောင်းသားထင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေက.. အလွန်ပေါတယ်..။ အထူးသဖြင့်.. ကျောင်း ပြန်ဖွင့်စအချိန်တွေ အဆိုးဆုံးပဲ..။
ရန်ကုန်ကပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းဆရာပေါက်စလေးတွေကလဲ.. ကျွန်တော်တို့နဲ့ အသက်အရွယ်က သိပ်မကွာဘူး..။ နောက်ပြီး ဖရက်ရှာကျောင်းသားလေးတွေကိုလဲ.. ကျောင်းဖွင့်စမှာ.. ကျွန်တော်တို့က မျက်မှန်းမတန်းမိသေးဘူး..။
သန်းငွေဆိုတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတန်း အတူတူကျောင်းသားပဲ..။ ကျောင်းဖွင့်စမှာ.. သေတ္တာကြီးတစ်လုံးနဲ့ အဆောင်ဝင်တယ်...။ ငှားလာတဲ့ကားကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီး အဆောင်ဆင်ဝင်အောက်မှာ.. သေတ္တာကြီးနဲ့.. ဒုက္ခရောက်နေတယ်..။ သူ့အခန်းက အပေါ်ထပ်မှာ..။ သေတ္တာကြီးကလဲ တစ်ယောက်တည်း မနိုင် .. ဖြစ်နေတော့.. ကူ မ ခိုင်းဖို့.. ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်နေတုံး.. ငနဲ တစ်ကောင် စိုက်တိုက်စိုက်တိုက်နဲ့ ရောက်လာတယ်..။
ကြည့်လိုက်တော့.. အဲဒီငနဲကို သန်းငွေ မမြင်ဖူးဘူး..။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း.. မမြင်ဖူး .. ဖရက်ရှာပဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့.. "ဟေ့ ညီလေး.. တစ်ဖက်လောက် ကူညီကွာ.. ဒီသေတ္တာ အဆောင်ပေါ် တင်ချင်လို့.. " ဆိုပြီး .. နှစ်ယောက်သား သေတ္တာကြီး အတူမပြီး အဆောင်ပေါ် တင်ကြတယ်..။
အဲဒီညနေမှာပဲ.. ဆရာတစ်ယောက် သန်းငွေ တံခါးလာခေါက်ပြီး အဆောင်သာယာကြေး လာကောက်တော့မှ.. မနက်က သေတ္တာကူမခိုင်းလိုက်တဲ့ ငနဲ ဖြစ်နေတယ်..။
Posted by navana at 3:13 PM
ကျောင်းမှာ.. ကျွန်တော်တို့အုပ်စုက စုစုပေါင်း ဆယ်ယောက်လောက် ရှိတယ်..။ အတူသွားအတူလာ အတူကဲတဲ့ အုပ်စုပေါ့..။ အဆောင်မှာ တစ်ခန်းကို နှစ်ယောက်နေရတာဆိုတော့.. အခန်းမတူကြဘူး..။ တချို့ဆို.. အဆောင်တောင် မတူဘူး..။ သူ့အခန်းကိုယ်ကူး.. ကိုယ့်အခန်းသူတို့လာလည်ပေါ့..။
လာလည်တဲ့သူက.. အခန်းထဲ ရှိရှိသမျှ စားစရာ.. သောက်စရာ.. တွေ့သမျှ.. အကုန်ကစ်တာပဲ..။ ဘာမှ မခံနိုင်ဘူး..။ သူတို့မကျွေးချင်.. အခန်းရှင်က.. လုံအောင်သာဝှက်ထားပေတော့..။ ကိုယ့်အခန်းထဲ သူတို့လာလည်လဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ..။ ကိုယ် သူတို့အခန်း သွားလည်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ..။ သာတယ်နာတယ် မရှိပါဘူး..။
ကျွန်တော်နဲ့ ငလုံး နဲ့က အဆောင်မတူဘူး..။ ဒါပေမယ့်.. နှစ်ဆောင်တစ်ဆောင် နေကြတာပဲ..။ တစ်ရက် ငလုံး သူ့အဆောင်ကနေ.. ကျွန်တော့်အဆောင်လာနေတာ.. အဆောင်ပေါ်က ကျွန်တော်က မြင်နေရတယ်..။ ကျွန်တော့်အခန်းကို.. သူလာနေတာပဲ..။
ကျွန်တော်လဲ.. ၀ယ်ထားတဲ့.. ကျွဲရိုင်းလစ်ပို ဗူးကို ကပျာကယာ ဖောက်သောက်လိုက်တယ်..။ ပြီးမှ.. ကျွတ်ကျွတ်အိပ် တစ်လုံးထဲ.. ရူးရူးပေါက်ထည့်လိုက်တယ်..။ လစ်ပိုဗူးခွံကို.. တံခါးဘောင်ပေါ်တင်ထားပြီး ရူးရူးတွေနဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ကို.. ပလပ်စတစ် ပိုက်ကလေး တပ်ပြီး .. လစ်ပိုဗူးခွံဘေးနားက.. တံခါးချိတ်မှာ.. တွဲလောင်းလေး ချိတ်ထားလိုက်တယ်..။ ရေသောက်နည်းလို့လားတော့မသိဘူး.. ကျွန်တော့်ဆီးက ၀ါကျင့်ကျင့် လေး ဖြစ်နေတယ်..။
"ငလုံး လာရင်ပြောလိုက်.. ငါ.. ကန်တင်းခနသွားတယ်.. " လို့ အခန်းဖော်ကို မှာပြီး အသာလေး လစ်ထွက်လာခဲ့တယ်..။
တံခါးဘောင်ပေါ်မှာ ကျွဲရိုင်းဗူးခွံတွေ့တယ်.. ။ တံခါးချိတ်မှာ.. ၀ါကျင့်ကျင့် အရောင်ရှိတဲ့.. အရည်တွေထည့်ထားပြီး..ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ကလေးက.. ပိုက်ကလေးတပ်လျက်.. တွေ့တဲ့.. မောင်ငလုံး တစ်ယောက်.. ဘာပြောကောင်းမလဲ.. ပွပြီဆိုပြီး အပီတွယ်ထည့်လိုက်တာ..